» अब छिट्टै वालुवाटारमा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनेछ ! -योगेश भट्टराई, ताली या गाली? अब छिट्टै वालुवाटारमा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनेछ ! -योगेश भट्टराई, ताली या गाली? – हाम्रो खबर
अब छिट्टै वालुवाटारमा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनेछ ! -योगेश भट्टराई, ताली या गाली?
admin 1147 Views
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता योगेश भट्टराईले अब छिट्टै आफूहरुको समूहबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने बताएका छन् ।
आफूहरु सडकमा आइसकेको भन्दै उनले संसद पुनर्स्थापना घोषणा नहुँदासम्म र वालुवाटारमा हामीले चुनेको प्रधानमन्त्री नबस्दासम्म सडक छाड्ने छैनौं ।’
‘सभामुखजी सदनको बैठक राख्नुस्’
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु हामी हौं भन्दै छातीमा लेखेर ल्याएका छौं’ भट्टराईले भने, ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो । हामी आयोगलाई भन्दैछौं, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब वालुवाटारको नेकपा होइन । यो सडकको नेकपा हो ।’
उनले हसिया हथौडाको झण्डा, यो सूर्य चिह्नको झण्डा आफूहरुको रहेको भन्दै यसलाई तलमाथि नगर्न आग्रह गरे ।